अचम्मकी डाक्टर, जो नांगै भएर विरामीको उपचार गर्छिन् - ज्ञानविज्ञान
विचित्र संसार /
अचम्मकी डाक्टर, जो नांगै भएर विरामीको उपचार गर्छिन्
Video विचित्र संसार | December 2, 2017 | biplov
आफुले विश्वका महान चिकित्सक फ्राइडको सिद्धान्त अनुरुप उपचार गरिरहेको उनको दाबी छ । यस थेरापी अनुसार पुरुषको यौन कुण्ठालाई बाहिर निकालिन्छ । यसबाट पुरुषले आफ्नो मनभित्र दबेका इच्छाहरु बाहिर निकाल्न सक्दछ ।
भनिन्छ, डाक्टरसँग हरेक रोगको औषधि हुन्छ । यदि सही समयमा रोग डाक्टरले पत्ता लगायो भने धेरैजसो रोगीले रोगबाट छुटकारा पाउँछन् ।
औषधि खुवाएर बिरामीलाई निको पारिदिने डाक्टर त सबै हुन्छन् । तर यो दुनियाँमा एकजना यस्ता डाक्टर पनि रहेछिन् जसलाई हेर्दैमा धेरै बिरामीको बिसञ्चो निको हुन्छ ।
सुन्दैमा अपत्यारिलो तथा अनौठो लाग्छ । तर अमेरिकी डाक्टर सराह ह्वाइटले आफ्नो जिउको दर्शन दिएरै धेरै बिरामीलाई निको पारिदिन्छिन् ।
२४ वर्षकी यी मनोचिकित्सक निर्वस्त्र भएर विरामीको उपचार गर्छिन् । उनकोमा परामर्श तथा उपचारका लागि आउने मनोरोगीहरुका अगाडि उनी निर्वस्त्र हुन्छिन् । बिरामीसँग निकै खुल्ला भएर कुराकानी गरिसकेपछि उनले मनोरोगीका सबै समस्याको पहिचान गर्छिन् र त्यसको सही उपचार पहिल्याउँछिन् ।
अमेरिकाको न्युयोर्ककी यी मनोचिकित्सककोमा उपचार गर्नका लागि बिरामीको घुइँचो नै लाग्दछ ।
तर खासमा उनले बिरामीलाई कुनै अस्पतालको कोठामा लगेर उसका अगाडि नांगै भएर उपचार गर्ने चाहीँ होइनन् । उनले अनलाइन मार्फत परामर्श दिन्छिन् र वेबक्याममा निर्वस्त्र हुन्छिन् ।
खासगरी पोर्नको कुलतमा फसेका पुरुष मनोरोगीहरुको उपचारमा उनको यो तरिका निकै प्रभावकारी हुने गरेको छ ।
Previous Postके बच्चा जन्माउने योजनामा हुनुहुन्छ ? के-के कुरामा ध्यान दिनुपर्लाNext Postकस्तो खानेकुराहरुले गराउछ एलर्जी ?
कुन समयमा भाइरस बढी सक्रिय हुन्छ ? यसले मानिसलाई बिरामी बनाउने काम पनि गर्छ जानीराखाै December 17, 2018
हामीले कागतीका फाइदा मात्र जान्दै अाएका छाै, यसकाे फाइदा मात्र हाेइन बेफाइदा पनि छन् जानिराखाै December 17, 2018
बढ्दाे चिसोका कारण छातीमा कफ जम्ने समस्या छ ? घरेलु उपचार बाटै ठिक हुन्छ December 15, 2018
किन र कसरी खाने ? जाडोमा बाँसको तामा December 13, 2018
कम उमेरमै स्मरणशक्ति त गुमाउनु हुदै छैन ? यस्ता कुरामा ध्यान दिनु अति जरुरी हुन्छ December 12, 2018